搜索 MĀ 的结果：
[မရ+ကွိ။ ဓာန်၊ဋီ၊သျ၊၁။၇၆။ မာ+အ။ ဝစနတ္ထဇောတိကာ၊ဋီ။၅။]
ma，41-so akkharā 33-ç 33- 25-ç 5- 5-khu pa-
မဗျည်း၊ ၄၁-လုံးသော အက္ခရာတို့တွင် ၃၃-လုံးမြောက်，ဗျည်း ၃၃-လုံးတွင် ၂၅-လုံးမြောက်，ဝဂ် ၅-ဝဂ်တို့တွင် ၅-ခုမြောက် ပ-ဝဂ်
Ma，（-kāra） the letter or sound m J．III，273 （sandhi-vasena vutta put in for the sake of euphony）； V，375 （ma-kāro sandhikaro）； KhA 155，224； SnA 181，383，404．（Page 511）
（၁） ပရိသတ်။ （၂） အပါယ်။ （၃） သိဝနတ် （မဟာဒေဝ）။ （၄） မ-ဝိဘတ်။ （၅） မ-ပစ္စည်း။ （၆） မ-ဂိုဏ်း။ （၇） အမိုက်တိုက်။ （၈） နိဂ္ဂဟိတ်မှ ပြောင်းလွဲလာသော-မ။ （၉） ပ-မှ ပြောင်းလွဲလာသော-မ။ （၁ဝ） မ ဗျည်း။ （၁၁） အာဂုံ-မ။ （၁၂） လ၊ တနင်္လာဂြိုဟ်၊ စန်း။ （၁။ အချိန်။ ၂။ အဆိပ်။ ၃။ မှော်အတတ်ပညာ လုပ်ထုံးနည်းနာ။ ၄။ လ၊ တနင်္လာဂြိုဟ်၊ စန်း။ ၅။ ပုဏ္ဏား၏အမည်တစ်မျိုး။ ၆။ ဗိဿနိုး၏အမည်တစ်မျိုး။ ၇။ သိဝနတ်၏အမည်တစ်မျိုး။ ၈။ ယမနတ်။ ၉။ သရသံရှည် ၃-ခုပါသော မ-ဂိုဏ်း။ ၁ဝ။ အသံ ၇-မျိုးတွင် ငါးခုမြောက်မဇ္ဈိမ （ကြိုးကြာ）သံ။ ပီအက်စအီးဒီ）။ မူရင်းကြည့်ပါ။
mā：adv．[〃] なかれ [禁止，強い決意，否定的願望，未来への危惧，疑問，否定等を示す．動詞は aor．，imper．，opt．をとり，時に pres．をとることもある] mā saddṃ akāsi 声を立てるなかれ．agginā mā ḍayhatu 火を燃すなかれ．mā pamādaṃ anuyuñjetha 放逸に従うべからず．mā paṭilabhati 得るなかれ．
Mā，【阳】月亮（the short form of māsa）。
Mā，（cp．Vedic mā），（否定词）勿、莫、不应（prohibition particle：not，do not，let us hope not）。表达否定的命令、劝告，常配合aor．。mā evaṁ akattha，不要这样（do not thus DhA．I，7）。mā abhaṇi，勿说（speak not Pv．I．33）。mā cintayittha，勿忧虑（do not worry DhA．I，12）。mā parihāyi，勿衰退（I hope he will not go short （or be deprived） of…M．I，444）。mā bhāyi，勿怖（fear not J．II．159； mā mariṁsu，勿死（I hope they will not die J．III．55； mā （te） rucci may it not please （you），i．e．please do not Vin．II，198）。mā evaṁ ruccitth，勿死（id．DhA．I，13）。2．with imper．：mā gaccha，勿去（J．I．152）。mā detha，勿施（J．III．275）。mā ghāta，勿杀（do not kill：see māghāta）。3．with pot．：mā anuyuñjetha，（Dh．27）。mā bhuñjetha，勿吃（let him not eat Mhvs 25，113）。mā vadetha，勿说（J．VI．364）。4．with indic．pres）。mā paṭilabhati，（A．V，194．-- A peculiar use is found in phrase ānemi mā ānemi，（shall I bring it or not? J．VI．334）。5．mā=na （simple negation） in māsakkhimhā，我们不能（we could not Vin．III，23）。
[īni eieaacaniteasā rhieiea，eiea aç aniteamarhi．nīti，sutta，nhā．392．]
[ဤနိပါတ်သည် ပုဒ်တို့၏အစ၌သာ တည်ရှိနိုင်၏၊ ပုဒ်တို့၏ အလယ်，အဆုံး၌မတည်ရှိနိုင်။ နီတိ၊သုတ္တ၊နှာ။၃၉၂။]
mā：[a prohibitive particle] do not．（m．） the moon．
Mā，（indecl．） [cp．Vedic mā，Gr．mή] prohibition particle：not，do not，let us hope not，I wish that ．．．not [cp．Lat．utinam & ne]．Constructed with various tenses，e．g．1．with aor．（prohibitive tense）：mā evaṁ akattha do not thus DhA．I，7； mā abhaṇi speak not Pv．I，33； mā cintayittha do not worry DhA．I，12； mā parihāyi I hope he will not go short （or be deprived） of ．．．M．I，444； mā bhāyi fear not J．II，159； mā mariṁsu I hope they will not die J．III，55； mā （te） rucci may it not please （you），i．e．please do not Vin．II，198； mā evaṁ ruccittha id．DhA．I，13．-- 2．with imper．：mā gaccha J．I，152； mā detha J．III，275．mā ghāta do not kill：see māghāta．-- 3．with pot．：mā anuyuñjetha Dh．27； mā bhuñjetha let him not eat Mhvs 25，113； mā vadetha J．VI，364．‹-› 4．with indic．pres．：mā paṭilabhati A．V，194．-- A peculiar use is found in phrase ānemi mā ānemi shall I bring it or not? J．VI，334．-- 5．mā=na （simple negation） in māsakkhimhā we could not Vin．III，23．（Page 527）
MĀ：（phó từ về ngăn cản） đừng，không được --mā [m] mặt trăng
（ထီ） （၁） ကျက်သရေ။ （၂） ကျက်သရေဆောင် ဥမ္မာဒေဝီ （မဟေသနတ်မင်း၏ မယား）။ （၃） အမိ။ （၄） နှိုင်းယှဉ်-တိုင်းတာ-ခြင်း။ （ပု） （၅） လ၊ စန်း။ （၆） လ၊တစ်လ၊ရက်ပေါင်း၂၉၊ ၃ဝ။ （၇） ပိတုံး။ （၈） မျက်လုံး။ ဒုမ္မီ-လည်းကြည့်။ （၉） မာ-ဓာတ်။
ဘူ+ကီ+တ+ဒိ = မာန ပရိမာနေသု-မြတ်နိုးခြင်း，နှိုင်းချိန်ခြင်းတို့၌။
ဘူ = သဒ္ဒေ-အသံပြုခြင်း၌။ မာတိ၊ မိနာတိ၊ မိနောတိ၊ မာယတေ။
mā：မာ	（အ） （ပဋိသေဓဝါစီနိပါတ်ပုဒ်）
မာ ဘာယိ မဟာရာဇ၊ မင်းကြီး မကြောက်လင့်။ မာ ဧဝံ ကရိတ္ထ၊ ဤသို့မပြုပါကုန်လင့်။ မာ ခါဒိတ္ထ၊ မစားကုန်လင့်။ မာ ဝဠဉ္ဇယိတ္ထ၊ မသုံးဆောင်ကုန်လင့်။ အယံ ဂစ္ဆတု ဝါ မာ ဝါ မယာ ဂန္တုံ ဝဋ္ဋတိ၊ ဤယောက်ျားသည် သွားသည်မူလည်းဖြစ်စေ မသွားသည်မူလည်းဖြစ်စေ ငါသည် သွားအံ့သောငှာ သင့်၏။ မာ နော အဂမာသိ၊ မသွားမူလင့်။
与 MĀ 相似的巴利词：